Cameroon vs Egypt: Isku aadka afar dhammaadka AFCON 2021 oo dhammaystirmay & Xilliga la ciyaari doono kulammada kaalinta saddexaad iyo Final-ka tartankan oo la xaqiijiyey – Gool FM
(Yaounde) 31 Jan 2022. Waxaa soo dhammaystirmay isku aadka afar dhammaadka Koobka qarammada iyo qaaradda Afrika ee AFCON 2021 kaddib markii uu xalay soo adkaaday xulka Masar.
Xulka qaranka Masar ayaa madaxa gelin doona xulka martigelinaya Koobka qarammada qaaradda Afrika ee Cameroon, halka Senegal iyo Burkina Faso ay isku beegmeen wareegga afar dhammaadka Koobka qarammada Afrika labadii xul ee adkaada ayaana iska xaadirin doona final-ka tartankan.
Kulanka koowaad ee afar dhammaadka Koobka qarammada qaaradda Afrika waxaa wada ciyaari doona Burkina Faso iyo Senegal, waxaana uu kulankan ka baasmi doonaa garoonka Ahmadou Ahidjo ee Magaalada Yaounde, marka ay taariikhdu tahay 02 bisha Febraayo 10:00 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Kulanka labaad ee Semi-finalka Koobka qarammada qaaradda Afrika ee u dhexeeya xulalka Cameroon iyo Egypt ayaa isaguna la ciyaari doonaa marka ay taariikhdu tahay 03 bisha Febraayo 10:00 Habeennimo xilliga geeska Afrika, waxaana uu ka dhici doonaa garoonka Olembe Stadium ee Magaalada Yaounde.
Labada xul ee laga adkaado afar dhammaadka ayaa kaalinta saddexaad ee tartankan wada ciyaari doona Axadda 6-da bisha Febraayo 7:00 fiidnimo xilliga geeska Afrika kulanka kaalinta saddexaad.
Halka kulanka Final-ka ee Koobka qarammada afrika labada xul ee soo gaara ay wada ciyaari doonaan Axadda 6-da bisha Febraayo 10:00 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Wixii faah-faahin ah oo tartankan AFCON la xiriira halkaan ayaad kala socon doontaa hadduu Eebbe idmo.